गुल्मीकाे महेन्द्र मावि केन्द्रमा १५ मिनेटअघि नै खोसियो कापी, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिएको भन्दै विरोध !
ARCHIVE, NEWSPAPER » गुल्मीकाे महेन्द्र मावि केन्द्रमा १५ मिनेटअघि नै खोसियो कापी, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिएको भन्दै विरोध !
गुल्मी/माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको पहिलो दिन महेन्द्र मावि केन्द्रमा १५ मिनेट बाँकी रहँदै निरीक्षकले कापी खोसेपछि परीक्षार्थी रुँदै बाहिरिएका छन् । केन्द्रकोे कोठा नम्बर १३ मा रहेकी निरीक्षक सरिता श्रीसले जनाउ घन्टीमै कापी खोसेकी हुन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।